Ngathi-iWistron Industrial Limited
Imbuyekezo Wistron Industrial Limited
Inkampani ebanzi yokudibanisa ushishino kunye norhwebo
I-Beijing Wistron Technology Ltd. yasekwa ngo-2012 yinkampani ebanzi yokudibanisa ushishino kunye norhwebo. Lishishini elibanzi elijolise kuphando nakuphuhliso, ukuveliswa kunye nokuthengiswa kwezixhobo zemveliso yokhuseleko lwamandla elanga kunye nezixhobo ezinxulumene noko eziqhelekileyo. Okwangoku, inkampani inemveliso yamalungelo awodwa omenzi wechiza, inenkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho kunye nesayensi ye-ISO9001, iimveliso zidlulile kwi-CE, i-ROHS, i-FCC, i-IP68 kunye nezinye izatifikethi, kunye nokuhambelana nemigangatho yaseYurophu naseMelika i-ASTM D4280 kunye ne-EN1463-1 .
Imveliso yobungcali yeqela le-R & D
Inkampani inemveliso yeR & D yemveliso eguqukayo kunye neyingcali, kwaye i-40% yenzuzo yonyaka iya kusetyenziselwa i-R & D yobuchwephesha kwaye ixhotyiswe ngokulungiswa kwenkqubo kunye nokudityaniswa kwenkqubo yeengcali zokuvelisa uthuli olungena-1000 yeemitha zesikwere. Inenkqubo yolawulo olungqongqo nolufezekileyo kwiindawo, imveliso kunye nolawulo lomgangatho, olunika isiqinisekiso esithembakeleyo somjikelo wokuhanjiswa, ulawulo lomgangatho kunye nenqanaba lokupasa eliphezulu.
Umgangatho, ukuthembeka, ukhuseleko kunye nokonga umbane kuqala
Sisebenza nzulu kolu shishino, sigcine ukubetha kwishishini, kwaye sihambelane nesikhokelo "somgangatho, ukuthembeka, ukhuseleko kunye nokonga umbane kuqala". Bambelela kwisicwangciso semveliso yeR & D, ukuvelisa kunye nokuthengisa. Ngoku, iimveliso zithunyelwe kuMzantsi-mpuma Asia, eYurophu naseMelika, kuMbindi Mpuma naseOstreliya, eAfrika, eMzantsi Melika nakwamanye amazwe nakwimimandla.
Ukunyaniseka, ukuzinikezela, ukuLungelelanisa, ukuYila
I-Wistron ithwala umoya wobumbano wokunyaniseka, ukuzinikezela, ukuLungelelanisa, ukuYila izinto ezintsha engqondweni ngalo lonke ixesha kwaye iya kuzama ukwanelisa abathengi beendlela zelanga kunye nokuphumelela isabelo sentengiso kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwiintsuku ezizayo. Injongo yethu kukwakha ubudlelwane beshishini obude kunye nokuxhamla kunye nabantu kwihlabathi liphela, siya kuluvuyela unxibelelwano lwakho, enkosi kakhulu!